सबै विधिहरू, जस्तै "वचन" पृष्ठभूमिमा हटाउन
जो प्राय जस्तै दिन डाक्टर या बस दिन कार्यक्रम "शब्द" प्रयोग कागजातहरू काम प्रयोगकर्ता संभावना समर्पित पृष्ठभूमि, पाठ, तालिका वा व्यक्तिगत शब्दहरू यस्ता एक महामारीले मार्फत आउन छन्। यो निर्धारण ध्यान आकर्षित गर्न अभिप्रेरित छ, तर अलग को अत्यधिक प्रयोग यसरी आफ्नो प्राथमिक समारोह contradicting, कष्टप्रद हुन सक्छ।
यस लेखमा हामी "वचन" सबै माथि तत्व देखि पृष्ठभूमिमा हटाउन कसरी कुरा हुनेछ। यो केही माउस क्लिक मा यस प्रकार को असुविधाको हटाउन मद्दत गर्नेछ।
पृष्ठ पृष्ठभूमि हटाउन
तपाईँ कागजात डाउनलोड र रंग पृष्ठभूमि हेर्दै यो खोलियो, छ भने सजिलो हुन यसलाई हटाउन। अब पाठ लागि "शब्द" मा पृष्ठभूमि रङ हटाउन कसरी कुरा।
दुर्भाग्यवश, कार्यक्रम "शब्द" विभिन्न संस्करणहरू पाठ पछि पृष्ठभूमिमा हटाउन विभिन्न तरिकाहरू छन्। यस लेखमा हामी वचन 2016 विचार हुनेछ तर वर्तमान विधिहरू अन्य संस्करण लागि उपयुक्त हुन सक्छ।
त्यसैले, अर्डर हटाउन मा पृष्ठभूमि रङ मा "वचन" तपाईं ट्याब "डिजाइन", यो शीर्ष प्यानल मा स्थित छ जान आवश्यक छ। इच्छित प्यानल हामीलाई खुल्छ। यो सही ध्यान। तपाईं खण्ड "रंग पृष्ठ" फेला पर्छ। यो खण्ड मा, "पृष्ठ रंग" मा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईं पृष्ठ को पृष्ठभूमि के रंग भर्न चयन गर्नुहोस्, वा यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। हटाउन लागि, "कुनै रंग" थिच्नुहोस्।
यो पहिलो विधि, जस्तै "वचन" पृष्ठभूमिमा हटाउन थियो। के तपाईं पृष्ठ मार्फत पाठ पछि पृष्ठभूमिमा हटाउन चाहनुहुन्छ भने यो प्रयोग गरिन्छ, तर तपाईं मात्र पाठ को लागि यो भने त जहाँ हामी सबै व्याख्या गर्नेछ पढ्न।
पाठ पछि पृष्ठभूमिमा हटाउन
किनभने यो तपाईं व्यक्तिगत वाक्य वा शब्द चयन गर्न अनुमति दिन्छ चयन यस प्रकार, अक्सर हुन्छ। यो अक्सर मानिसहरू पाठ केही तत्व ध्यान आकर्षित गर्न चाहने द्वारा प्रयोग गरिएको छ। का ", वचन" को रूप मा, कुरा पृष्ठभूमिमा पाठ हटाउन गरौं।
सुरुमा, तपाईं आवश्यक माउस कर्सर पृष्ठभूमिमा छ कि पाठ चयन गर्नुहोस्। अब शीर्ष प्यानल माथि छ जो ट्याब "घर", खोल्नुहोस्। को "मार्ग" मा तपाईँले "भर्नुहोस्" फेला पार्न आवश्यक छ। त्यो रंग को एक बाल्टिन रूपमा देखाइएको छ। को "कुनै रंग" चयन बटन र ड्रप-डाउन मेनुमा क्लिक गर्नुहोस्, पछिल्लो समयमा रूपमा। उल्लेख गर्न सकिन्छ रूपमा, चयन गरिएको पृष्ठभूमि गायब।
पाठ चयन को रंग - दोस्रो साधन पनि हो। यो "फन्ट" मा स्थित छ। चयन भएपछि, तपाईं छानेर पाठ पृष्ठभूमि मेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईं व्याख्या बिना आफैलाई सम्हाल्न सकून् यो धेरै सजिलो छ।
सम्पूर्ण तालिका पृष्ठभूमि हटाउन
एक साधारण सुविधा तालिका पृष्ठभूमि छ। तालिका सबै एकैचोटि एकल कक्षहरू रूपमा पुन: प्राप्त गर्न सक्छ, वा। अब हामी सबै तालिका देखि पृष्ठभूमिमा हटाउन "वचन" को रूप मा, विश्लेषण।
सजिलो भन्दा यो अघि थियो गर्नुहोस्। तपाईं सुरुमा सम्पूर्ण तालिका आवंटित गर्न आवश्यक छ। यो गर्न, यो माथिल्लो भागमा कर्सर सार्न र माथिल्लो बायाँ कुनामा देखा पर्छ जो पार, मा क्लिक गर्नुहोस्। प्रेस निम्न सन्दर्भ मेनु प्रदर्शन गर्न दायाँ-क्लिक गर्नुहोस्। मेनु माथि, रंग को बाल्टिन ( "भर्नुहोस्") को परिचित छवि मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं पछिल्लो समय जस्तै कुरा चाहिन्छ, - "कुनै रंग" चयन गर्नुहोस्।
अब तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ तालिका बेरंग कसरी भएको छ, र तपाईं इच्छित परिणाम हासिल गरेका छन्।
तालिकामा कक्षहरू को पृष्ठभूमिमा हटाउन
त्यसैले, हामी कसरी तालिका मार्फत भरण हटाउन बाहिर समझ, तर के तपाईं मात्र केही कक्षहरू discolor आवश्यक भएमा? वास्तवमा, त्यहाँ केही गाह्रो छ। सबै कार्यहरू अघिल्लो विधिमा एकदम समान छन्।
अर्डर व्यक्तिगत कक्षहरू देखि पृष्ठभूमिमा हटाउन मा, पहिले तपाईँले ती सबै भन्दा सेल पहिचान गर्न आवश्यक छ। कि हाइलाइट थियो त, अन्य गर्न कर्सर तान्नुहोस् कक्षहरू को एक मा दायाँ माउस बटन समातेर तपाईं रंग पट्टी गर्न चाहनुहुन्छ कि क्षेत्र - यो केवल गरेको छ। तपाईंले सही बटन जारी, तपाईं एक सन्दर्भ मेनु (अन्तिम समय जस्तै) हेर्नुपर्छ। यो मेनु, तपाईँले "कुनै रंग" चयन गर्न आवश्यक छ। चयन गरिएको कक्षहरू यो चयन नष्ट हुनेछन्।
खैर, तपाईं एक सेल चयन रद्द गर्न चाहनुहुन्छ भने, बस दायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस्। र Marquee मेनु देखा छैन भने, पछि, त्यसपछि चासो क्षेत्र फेरि दायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस्।
प्रतिलिपि गर्दा पृष्ठभूमिमा हटाउन
अब जब इन्टरनेटबाट प्रतिलिपि देखिन्छ जो "वचन" मा पृष्ठभूमि (खैरो) हटाउन कसरी कुरा गरौं। तपाईं र इन्टरनेट तपाईंको जानकारी र कागजात "वार्ड" पेस्ट भने तपाईंले एक सय प्रतिशत सहन र ढाँचा कि प्रतिलिपि जब अवलोकन छन्। यो मात्र होइन पृष्ठभूमिमा को रंग, तर अक्षर, फन्ट को उचाइ, र अधिक हुन सक्छ।
अक्सर, पृष्ठभूमि रङ रंग मा खैरो छ, र त्यो हामी सफा हुनेछ के हो, तर सामान्य मा, कुनै पनि रंग तल देखाइने जस्तै तरिका हटाइएको छ।
जब तपाईं प्रतिलिपि पृष्ठभूमिमा उन्मुक्ति पाउनु, त्यहाँ तीन तरिका हो।
को "फन्ट" मा "घर" ट्याब मा "खाली सबै ढाँचा।" चयन गर्नुहोस् प्रतिमा अर्को एक पत्र संग रबड देखाउँछ। यो बटन क्लिक गर्नुहोस् र सबै चयन गरिएको पाठ विशेष मा, यसको ढाँचा, पृष्ठभूमि रङ रिसेट हुनेछ।
को "शब्द" मा पाठ सम्मिलित, अघि पहिलो नोटबुक गर्न उल्टो क्रममा त्यसपछि प्रतिलिपि र। नोटबुक ढाँचा ग्रस्त छैन भन्ने तथ्यलाई।
तपाईं कागजातमा खाली ठाउँ पाठ, पहिलो प्रेस दायाँ माउस बटन पेस्ट र मेनु चयन गर्दा (पत्र "एक" संग प्लेट) "पाठ मात्र राख्नुहोस्"।
त्यसैले तपाईं सबै तरिका कसरी मा पृष्ठभूमि रंग हटाउन थाहा "शब्द।"
MES-प्रणाली: निर्माता बीच एक नेता रूपमा स्थिति गर्न कदम लागि
त्रुटि 503. कारण के हो?
एक USB फ्लैश ड्राइव विन्डोज स्थापना मिडिया कसरी बनाउने र मात्र
तपाईँको कम्प्युटरमा ध्वनि कसरी स्थापित गर्ने। समायोजन चालक मापदण्डहरू
यसको बजार मूल्य एक सूचक रूपमा व्यापार को सकल आय
कसरी एक स्वादिष्ट पकवान प्राप्त गर्न sausages कुक गर्न
फूल लागि समर्थन
एडप्टर युएसबी OTG: अवसर, विशेषताहरु, मूल्य
त्यो समुद्री चित्रकार को चित्रहरु मा चित्रण? यो विधामा काम गर्ने उल्लेखनीय कलाकारहरूको